‘सार्थक जीवन र मृत्युको विज्ञान’ विषयक विचार–गोष्ठी आयोजित | Nepali Sahitya Ghar – नेपाली साहित्य घर
Home समाचार कला / सहित्य ‘सार्थक जीवन र मृत्युको विज्ञान’ विषयक विचार–गोष्ठी आयोजित
२०७९ असार २ गते, काठमाडौँ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, दर्शनशास्त्र विभागद्वारा ‘सार्थक जीवन र मृत्युको विज्ञान’ विषयक विचार–गोष्ठी आयोजना गरियो ।
प्रज्ञा भवनको देवकोटा सभाकक्षमा आयोजित विचार–गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले जीवन र जगत्को रहस्य खोज्दै जाँदा दार्शनिकहरूले जीवन र मृत्यु दुवै जीवनका शाश्वत सत्य हुन् भनी निचोड निकालेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “हाम्रो जन्म सत्य हो । हामी मर्छौं, त्यो पनि सत्य हो । हामीले भोगेको, जानेको कुरा हो, हाम्रो जीवनमा सत्य छ । जीवनलाई सार्थक कसरी बनाउने भन्ने कुराचाहिँ गम्भीर प्रश्न हो । मान्छेको मनोवृत्ति देशकाल परिस्थितिअनुकूल बनेको हुन्छ । जीवनलाई कसरी सार्थक बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा आफैँमा निर्भर रहन्छ ।”
कुलपति उप्रेतीले पूर्वीय जीवनपद्धतिको महत्त्वलाई स्थापित गर्न विद्वान्हरूबाट धेरै राम्रा काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले संसार चिन्ने हो भने हिमवत् खण्डमै आउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै भन्नुभयो– “हामीले हाम्रो सभ्यता र संस्कृति बुझ्नु पर्छ । ज्ञानको क्षेत्रमा नयाँ परिभाषा आइरहेको छ । नयाँ तथ्य र निष्कर्ष निस्किन्छ भन्ने चेतनाका संवाहक नेपाली विद्वानहरूको प्रयत्न स्तुत्य छ । पूर्वलाई स्थापित गर्ने गरी निरन्तर बहस हुनु जरुरी छ ।”
सदस्य सचिव तथा दर्शनशास्त्र विभाग प्रमुख प्रा. जगत्प्रसाद उपाध्यायले ‘सार्थक जीवन र मृत्युको विज्ञान’ विषयक विचार–गोष्ठी मानव जीवन र जगत्का सम्बन्धमा सार्थक विमर्श गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले दर्शनशास्त्र विभागबाट भइरहेका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूका बारेमा समेत प्रकाश पार्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो– “पहिला भारत वर्ष भनिन्थ्यो । अहिले भारत वर्ष विभिन्न देशमा खण्डित छ । अब भारत वर्ष भन्न मिल्दैन । तसर्थ हामी हाम्रो भूमिमा हाम्रा ऋषि–महर्षिहरूले प्रतिपादन गरेका जीवन दर्शनसम्बन्धी ग्रन्थ तयार गरी प्रकाशन गर्ने तयारीमा छौँ ।” सदस्य सचिव प्रा. उपाध्यायले भन्नुभयो– “विज्ञान प्रयोगशालामा जान्छ तर दर्शनशास्त्रले जीवन र मृत्युका बारेमा भन्छ । अरुलाई लाभ दिएर क्रियाशील बाँच्ने जीवन सार्थक हुन्छ । जीवन जिउने प्राणतत्वलाई जीवन भनिएको छ । प्राण धारण गर्नु नै जीवन हो । हामीले मृत्युअघिसम्म पल पल मृत्युलाई सामाना गरिरहेका हुन्छौ । यो नै मृत्युको विज्ञान हो ।”
सामाजिक शास्त्र विभागका प्रमुख प्रा. दिनेशराज पन्तले भन्नुभयो– “विश्वमा पाश्चात्यको विजय सैन्यबलभन्दा पनि बुद्धिवलले नै भएको हो । संस्कृत वाङ्मय, संस्कृति र जातजातिका बारेमा पूर्वीय दर्शनमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छन् । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा पहिले पनि विक्रमको १२ औँ १३ औँ शदीसम्म हाम्रा पुर्खाले विद्याका आयाम बढाएका थिए । १७ औँ शताब्दीदेखि अत्यन्त कम भएको हो । गाथा गाएको मात्रै हो । यतातिर सबैको ध्यान जाओस् ।”
अनौठो सपना – रोजन बोहरा
असार ४ , २०७९ शनिबार- ०३:००